Ahoana raha miseho ao amin'ny fampiharana Search ilay Siri Remote vaovao? | Vaovao IPhone
Ahoana raha miseho ao amin'ny fampiharana Search ilay Siri Remote vaovao?
Na dia tsy hitako manokana aza ny habeny sy ny refin'ny Apple Siri Remote vaovao, raha fantatro tsara ny maodely ankehitriny na teo aloha nilaza tsara kokoa ary tena kely sy manify ity ka mazava ho azy fironana miafina amin'ny zorony rehetra avy amin'ny sofa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Azonao an-tsaina ve fa ny Siri Remote vaovao dia mifanaraka amin'ny rindranasa Search ary mampifandray azy amin'ny alàlan'ny Bluetooth? Toa azo atao izany ary ny mpanampy Siri no niandraikitra ny fanivanana an'io mety ...
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanambara ny daty marina an'ny hetsika "Spring Loaded" an'i Apple i Siri ankehitriny dia manambara ny mety hisian'ny Siri Remote vaovao hifanaraka amin'ny application Search ary ajanony ny aretin'andoha rehefa very ao an-trano, birao sns. Avy amin'ny tranonkala MacRumors Nasehon'izy ireo taminay ity vaovao ity izay mety ho an'ny mpampiasa marobe na farafaharatsiny ho an'ireo izay mikasa ny hividy ny Apple TV vaovao na koa ny Siri Remote fotsiny.
Ity vaovao ity izay tsy nohamafisin'ny Apple tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny andro fampisehoana dia mety ho zava-misy ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ilaina ny manam-paharetana ary miandry mandra-pahatongan'ity fitaovana ity eo am-pelatanan'ny mpampiasa na ny horonan-tsary an'ireo youtuber fanovozan-kevitra miaraka amin'ny hevitra tsirairay avy. Izahay dia efa te hahita raha nanampy an'ity safidy ity i Apple na tsia amin'ny Siri Remote tena ho tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Ahoana raha miseho ao amin'ny fampiharana Search ilay Siri Remote vaovao?
Ny App Store dia mandray am-pomba ofisialy ny soso-kevitry ny fikarohana any Etazonia sy Kanada
Spotify dia mamerina manamboatra ny sehatry ny Library ary manampy sivana mavitrika